Ukukhawuleza njani ukuHambisa iVidiyo ngokuKhawuleza? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 5, 2021 0 IiCententarios 359
Ukufunda ukuqhubela phambili okanye ukubuyisela umva ividiyo ye-YouTube kwisicelo esiphathwayo saleqonga kulula. Ukuba awukazami ukuzama olu khetho, siyakumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo apho siza kukufundisa amanye amaqhinga okukufeza ngemizuzwana embalwa.
Lo ngomnye wemisebenzi enomdla ebandakanya iYouTube kwinguqulelo yeselfowuni, kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android. Ngale ndlela abasebenzisi Bazokwazi ukuqhubela phambili okanye ukubuyisela umva nayiphi na ividiyo ngendlela elula nekhawulezayo. Hlala nathi kwaye ufunde indlela yokwenza.
Abasebenzisi abaninzi bakholelwa ukuba ukuqhubela phambili kunye nokuguqula umsebenzi kwiqonga likaYouTube yinto entshaNangona kunjalo, esi sixhobo sifumaneka ukusukela nge2017, nangona ingekaziwa njengabanye.
Inyani yile yokuba lo msebenzi ngokuqinisekileyo wothuswe ngaphezu kwesinye, ngakumbi abo basebenzisi abangathandi "ukuchitha" ixesha bebukele umxholo ongafanelekanga. Ndiyabulela esi sixhobo akusayi kubakho mfuneko yokuya kwibar yexesha ukuqhubela phambili okanye ukubuyisela umva ividiyo.
Amanyathelo okwenza umsebenzi
Ngaba uyafuna ukufunda indlela yokukhawulezisa nokubuyisa umva iividiyo kwiYouTube ngokulula? Into yokuqala kunye neyona ibalulekileyo ekufuneka uyenzile kukuvula lo msebenzi ngaphakathi kwesicelo. Ayisiyonkqubo inzima, ke akukho nto ixhalabisayo. Nanga amanyathelo ekufuneka elandelwe:
Umsebenzi ngokusisiseko ikuvumela ukuba ubuyele umva okanye uthumele nayiphi na ividiyo iposwe kwiqonga leYouTube ngaphandle kokucinezela ibha yexesha ebonakala ezantsi kwesikrini.
Ngoku ngokucofa kanye Uyakwazi ukuqhubela phambili okanye ubuyisele umva ividiyo oyibukeleyo kuYouTube. Ukuba ucinezela ngasekhohlo emva koko ividiyo ibuyela umva kodwa ukuba ucinezela ekunene kwesikrini ividiyo iya kuya phambili.
Vula usetyenziso kwiselfowuni yakho
Inyathelo lokuqala liya kuba vula usetyenziso olufakelwe kwisixhobo sethu esiphathwayo. Khumbula ukuba lo msebenzi uqale wabandakanywa kule nguqulo. Ukuba awunayo iapps kwiselfowuni yakho, unokuzikhuphelela simahla nakweyiphi na ivenkile yosetyenziso ngokuxhomekeka kwinkqubo oyisebenzisayo.
Yiya kwiprofayili yomsebenzisi
Nje ukuba sibe ngaphakathi kwesicelo kufuneka yiya kwi icon apho kuvela khona ifoto yeprofayile. Uyifumana kwindawo ephezulu yesikrini. Kufuneka ucofe nje kwi-avatar ukufikelela kuthotho lwezinto onokukhetha kuzo.
Cofa kwi "Useto"
Inyathelo elilandelayo liya kuba nqakraza kwi "uqwalaselo" ukhetho kwaye ucofe ku "Ngokubanzi" ukhetho. Ukusuka kwelo candelo siya kuba nakho ukwenza ukuba umsebenzi wokuqhubela phambili kunye nokubuyela umva kwiividiyo ze-YouTube.
Khetha ukhetho "cofa kabini"
Iinketho ezahlukeneyo ziya kuvela kwiscreen. Kule meko, kuya kufuneka ufumane enye ethi Cinezela kabini ukuya ngaphambili okanye ngasemva”Kwaye ukhethe ukuze wenze lo msebenzi.
Kuya kufuneka uqaphele kuba kwezinye izixhobo kunokuvela phantsi kwelinye igamakodwa iyakuhlala ichaza into enokwenziwa.
Xa ucofa olu khetho, iwindow entsha izakuvela apho Kuya kufuneka ubonakalise ukuba mingaphi imizuzwana ofuna ukuya kuyo okanye emva ngalo lonke ixesha ucinezela imiphetho yesikrini sakho. Khetha ukhetho lokhetho lwakho kwaye kunjalo.
1 Inqaku elitsha?
2 Amanyathelo okwenza umsebenzi
2.1 Vula usetyenziso kwiselfowuni yakho
2.2 Yiya kwiprofayili yomsebenzisi
2.3 Cofa kwi "Useto"
2.4 Khetha ukhetho "cofa kabini"